I-Richter Igama lomxholo kunye neNtsapho yeMbali
Kuthetha ukuthini igama elithi Richter Name?
Interethi ye-Richter ithetha umntu "owayengumphathi weNkosi kwidolophana," igama lomnxeba ovela kumbindi ophezulu ophakathi kwesiJamani, okuthetha ukuba "umgwebi," kwaye uvela kuMbindi oPhakamileyo waseJamani, okuthetha ukuba "ukwenza okulungileyo." Eli gama lalivame ukusetyenziswa empuma yeJamani, apho ifani isabonakala kakhulu kunamhlanje, ukubonisa intloko yedolophana, ngokuqhelekileyo ibe yindlalifa.
I-RICHTER yiyona yeyona nkcukacha yesi - 14 eqhelekileyo yesiJamani .
Igama lomthombo: isiJamani , isiCzech
Igama elinguNye igama elithi Spellings: RYCHTR, RYCHTAR, RECTOR
Abantu abaPhezulu abaneNyina
UCharles Francis Richter - i-American seismologist kunye ne-physicist; Umvelisi wezinga le-Richter
UAdrian Ludwig Richter - umculi waseJamani
Agasti uGottlieb Richter - udokotela waseJamani
UBurton Richter - umvuzo weNobel-ophumelela kwi-physics yaseMerika
UFranz Xaver Richter - umqambi waseCzech
UJeremias Benjamin Richter - isazi samachiza saseJamani; umvelisi we-stoichiometry theory
UJohn Richter - unjiniyela waseNorway-isiSweden kunye noshishino
UGerhard Richter - umzobi waseJamani
Uphi igama elibi kakhulu eliqhelekileyo?
Inombolo yeRichter namhlanje ixhaphake kakhulu eJamani, ngokusasazwa kwebhenwe kwi-Forebears, apho ihamba njengeyona nkcukacha yesibini edlalelekileyo kwilizwe. Kuqheleke kakhulu kwi-Austria, apho i-63.
Ngokutsho kweWorldNames PublicProfiler, i-Richter iqheleke kakhulu kwimntla-mpuma yeJamani, ngokukodwa eSachsen, kodwa nakwiBrandenburg, eSachsen-Anhalt naseBerlin.
Idata esuka kuVerwandt.de iyavuma, ibonisa ukuba inani elikhulu labantu abaneferenti ye-Richter eJamani zihlala eBerlin, ilandelwa yiDresden, iLeipzig, iHurbourg, iMunich, i-Chemnitz, i-Region Hannover, i-Elbe-Eister, i-Sächsische Schweiz ne-Freiberg.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name RICHTER
Indlela Yokuphanda Amanquba aseJamani
Funda indlela yokulandelela iingcambu zakho zaseJamani ukuya kwilizwe elidala isinyathelo ngesinyathelo, ekufumaneni iidolophu zasekhaya zaseJamani ukufikelela kwiirekhodi eJamani.
I-Crest Family Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injengekhaya laseRichter okanye ingubo yeengalo kwiinferensi ye-Richter. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Iforter Family Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela ethandwayo yohlobo lomnxeba weferensi ye-Richter ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho we-Richter.
I-FamilySearch - RICHTER Genealogy
Hlola iziphumo ezigidi ezili-11 ezivela kwiirekhodi zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca enxulumene nomninimzi we-Richter kule website ye-intanethi ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-RICHTER Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLwazi lweeNtsapho
I-RootsWeb ibamba amanqaku amaninzi angabhalwa ngabangcwaningi beferensi ye-Richter.
DistantCousin.com - I-RICHTER Genealogy & Imbali Yentsapho
Hlola ii-yolwazi zamahhala kunye neefayile zodidi lwegama lokugqibela lika-Richter.
I-GeneaNet - iReckter Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho, kunye nezinye izixhobo kubantu abanomnxeba we-Richter, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
Uzalwane lweRichter and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanefayile yeRichter kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
I-DUPONT - Igama lomnxeba Umxholo kunye neNtsapho Yembali
Yiyiphi iNqanaba leNqanaba kunye neSilinganiso seSpepe sika-Augusta kaZwelonke?
I-Rostrum, Njengoko isetyenziswe kwiMpilo yoLwandle
IiNkcazo zeSpeyinti zokuNokwenzeka: Indlela yokuthi 'Mhlawumbi' okanye 'Mhlawumbi'
I-Famous Famous Choreographers ye-Past and Present
Ikhadi leKhadi leThathu